हन्टिङ काण्ड : भाग २
हन्टिङ काण्ड : भाग १ पढ्नुभयो ? छैन भने यहाँ क्लिक गरेर पढ्नुहोस् ।
nod Magar लाई हाम्रो रामकहानी सुनाएपछि निकै ठूूलो चिठ्ठा हात लागिसकेपछिको क्षणमा जस्तै मन फुुरुङ्ग भयो । तर बिनोद लास्ट सिक भइसकेको थियो । लाग्थ्यो ऊ नजिक कुकुर्नी देखेपनि छोड्ने मुडमा थिइन । COC खेेल्नु, फेेसबुक चलाउनु, गफ गर्नु, हाँस्नु बोल्नु सबै भुुलेर बिनोद हर दस मिनेटमा ट्वाइलेट जान थाल्यो । मनले भन्यो "किन सुनाइस बिकास तैले उसलाई यस्तो कामुक कहानी ? उसले आफूूलाई त सम्हाल्ला रे तर उसको यति जिद्दी गर्ने भाइलाई सम्हाल्न सक्ला ?" व्यर्थ सुनाएछु हाम्रो रामलिलाको कहानी । मन निकै खल्लो भयो । दिमाग तनाबग्रस्त हुन थाल्यो । दिउँसो गरेको मोज मस्ति अनि महसुस गरेको त्यो रिफ्रेसमेन्ट क्षणभरमै चकनाचुर भयो मानौँ उसको त्यो सिक मुडले मेरो रिफ्रेसमेन्टरुपी ऐनामा ढुङ्गा मुडा प्रहार गरि चकनाचुर बनाइदिएको छ तर दोष उसको थियो र ? पक्कै थिएन । मेरो लागि आफूू नजिक भएको केटी पनि छोड्दिने मान्छे हो उ, मसँग जेलस भएको भनेर त म कल्पना सम्म गर्न सक्दिँन । तर पनि सल्युट गर्छु त्यस बोकालाई जसले यस्तै सिक भएर नै भनेको हुनुपर्छ सेक्स अन्धो हुन्छ भनेर । त्यसैले त दर्जनौँ बोका केटाहरु बहाना बनाउँदै एउटै केटीको नजिक हुन खोज्छ बिस्तारै सरिसरि, आज बिनोद जस्तो दुई दिनमा एकचोटि ट्वाइलेट जाने मान्छेलाई पखाला लागेको बहाना पार्दै ट्वाइलेट जाने पार्दैछ घरिघरि ।
झिस्मिस साँझ परिसकेको थियो । बिनोद, पल्लब र म कौशीमा बसेर कोकाकोला खादैं गफ गर्दै थियौं । एउटा जम्बु बतल रित्याएर पल्लब रुम तिर गएर याक्स (पोर्न भिडियो) हेर्न भनेर तल तिर लाग्यो । पल्लब गएको ५ मिनेटपछि सुनिता कौशीमा आईपुगिन सुकाउन राखेको लुगा बटुल्न । सुनितालाई बिनोद कौशीमा छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । बिनोद कौशीको अर्को कुनामा थिए जहाँ बत्तीको लाईट पुग्दैन थियो । सुनिता चाँही बत्ती भएको साईडमा थिईन । सुनिताले सेतो कटनको कुर्ता सुरुवाल लाएकी थिईन र पोकाहरुलाई कुर्ता सुरुवालको सेतै सलले छोपेकि थिइन । बिनोद बिस्तारै सुनितातिर लम्केर उसको अगाडी पुगेर बोलायो - “सुनिता” बिनोद चाहन्नथ्यो सुनिता डराओस् भनेर । सुनिताले बिनोदतिर फर्किएर हेरिन । यत्तिकैमा बिनोदले सुनिताको हात समातेर “यता आउ” भन्दै तानेर हामीले कोकाकोला खाई रहेको ठाँउमा लग्यो ।
बिनोद कुर्शीमा बसेर सुनितालाई आफ्नो तिघ्रामा बसाउन लाग्यो । सुनिताको मुख बिनोदतिर फर्किएका थिए । उनका हातहरु बिनोदका हातहरु माथि थिए । उसका पोकाहरु बिनोदको नाकको हाराहारीमा थियो । बिनोदले सुनितालाई बिस्तारै आफ्नो नजिक ताने र उनका ओठहरु चुम्न थालें, जिब्रो चुस्न थाले । बिस्तारै उसले सुनिताको दाईने पोका कुर्ताबाट बाहिर निकालेर चुस्न थाल्यो । यस्तो लाग्थ्यो बिनोदले सुनिताको दूध हैन आँँप चुसिरहेको छ ।
“कोई आउलान, छोड्नुस् न”, सुनिताले भन्दै थिईन । बिनोदले नसुनेको जस्तो गरेर पोका चुसिनै रह्यो । पोका चुस्दै बिनोदले भन्यो - “भोली म होटलमा कोठा लिउँ ?” “राती ?” सुनिताले सोधिन । “राती हैन, दिउँसो”, बिनोदले भन्यो । “दिउँसो त कलेज छ”, सुनिताले भनिन । “एक दिन कलेज छोडेर के हुन्छ ? प्लिज के, मेरो लागि नाई नभन न ल बिनोद नखरा पार्दै फकाउन लाग्यो । सुनिताले लजाउँदै “भोलि त मिल्दैन, पर्सि हुन्न ?” भनेर सोधिन् । आगो नराम्ररी लाग्या रै'छ सुनिताको मालमा भन्ने सोचेर बिनोदले भन्यो - “ल ठिक छ, पर्सि सही ।”
यत्तिकैमा तलबाट सुनिताको बहिनीले उसलाई बोलाईन । बिनोदको पोका चुसाई कर्म त्यहीँँ इतिश्री भयो । पर्सिको रंगिन दुनियाँको कल्पनामा बिनोदले त्यहीँँ कौशीमा आफ्नो घोर्ले भाई निकालेर एक पटक हस्ते हान्यो । मोरा मगरको छोरा भएपनि माल गतिलै रहेछ । उम्लेको जवानीको रस फाल्दै बिनोदले एकचोटि पुरै शरिर कच्याक कुच्युक गरेर खुुम्च्यायो र कतै मान्छेले त देखिराछैन भनेर लाटाकोसेरो जस्तै उताततै टाउको घुुमायो अनि निदोएको भाइलाई झोलुङ्गोमा राखेर हाक थुुुु गर्दै कोठामा गएर पल्लबसंगै बसेर एक्स हेर्न थाल्यो ।
भोली भयो । बिहान उठेर होटेल पनि बुक गर्नु थियो तर कुन होटेल, कहाँ, कसरी लिने बिनोदलाई केही थाहा थिएनँँ । बिनोद मनमनै केही सोच्दै थियो । अचानक उसलाई पल्लबको याद आयो । पल्लब एक नंबरको रन्डो थियो भनेर सायद भनिराख्न जरुरी छैन होला । हुन त बिनोद भन्दा एक बर्ष जेठो भएनी केटीको दलाल नैै थियो । उसकै कारण मेरो काण्ड (#हन्टिङ_काण्ड भाग : १) बनेको थियो र मेरो भर्जिनिटि सखाप भएको थियो ।
मोराले के कसरी पट्याउँथ्यो थाहा छैन तर पनि बोकाले जसोतसो केटी पट्याइहाल्थ्यो । भर्जिन पुति देखि सुट्डीसम्म, राम्रो साली देखि हप्सी जस्तै कालिसम्म, लबर जस्तो टाइट हुरहुर भर्जिन पुतिदेखी अङ्खरामा हात हालेर चलाएझैैँँ हुने झुुर पुतिसम्म उसको अनुभव थियो । पोर्न हेर्ने मेलो छोडेर बिनोदले सुबास (InNo-cNt Boy Subas) (Subash काण्ड comming soon! 😂) लाई फोन गर्यो ।
“हेल्लो बिनोद सर, के छ हालखबर ?” नामको पछाडी 'सर' जोडेर कसैले बोलाए त्यो सुबास हो भने फरक पर्दैनथ्यो । सुबासले आफ्नो युनिक स्टाईलमा बोलेपछि कपालको स्टाइल मिलाउँदै बिनोदले “ठिकै छ…" भनेर जवाफ दिए । केही बेरको गफ पछि सुबासले भने, “बिनोद अहिले स्कुल जान लाको भरे बेल्का पाँच बजेतिर फर्किन्छु अहिले फोन राख्छु” भनेर उसलेे फोन राख्यो ।
सुबास आयो भने त होटल पाउन नि गार्हो होला अनि बल्ल बल्ल हात परेको माल पनि खुुुुल्किला भन्ने सोचेर बिनोदले सोँच मग्न भयो । उसले सुबासलाई किन फोन गरेको भन्ने कुरा मलाई प्रस्छ । बिचारा होटल बुक गर्न लगाउन फोन गरेको बेकाममा उसको मोबाइबाट कन्डम किन्न पुग्ने पैसा खर्च भयो ।
पोर्नहबमा पोज पोजमा हानिराको एक्स भिडियो हेरिराको पल्लबको ध्यान मोड्दै उसले भन्यो - "ओए, पल्लब तिमीसँग एउटा कुरा सोध्नु थियो, एक्स हेरेर अघाएन ?” “सोध न मुजी”, पल्लबले भन्यो । “इन्टरभिउको लागि लाइन बस्नुपर्छ त्यो दुलेगौंडा चर्च साइडमा होटेलमा बसुँ कि भनेर सोचेथेँ मैले होटेलको मान्छे चिन्या छैन, आफूूलाई था छ कि भनेर सोध्या”, बिनोदले भन्यो । “कैले हो चाहिने तिम्लाई ?” पल्लबले सोध्यो । “भोली एकदिनलाई”, बिनोदले भन्यो । “ल म भरे दुलेगौंडा पुगेसी खबर गर्छु अहिले डिस्टर्ब नगर” उ आफ्नै धुनमा पोर्न हेर्न थाल्यो ।
दुई चार मिनेट पोर्न हेरेपछि उसले केई सम्झिएझैँ गरेर भन्यो - “ओए बिनोद मुजी तिमिल्सिना होटेलमा बस्छस त ?” “अँँ पल्लबले टन्न पैसा देला नि त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड होटेलमा बस्नलाई ।”, बिनोदले भने ।
“मुजि दाई हुँदाहुँदै पैसाको चिन्ता नगर न । म भा'को के काम ?” पल्लबले फुँई लगाउँदै भन्यो । मख्ख परेर बिनोदले अझ फुर्काउँदै भन्यो - "पल्लब मान्छे नै महान ।" एक्छिनपछि पल्लबले भन्यो ए साँच्चै तिमिल्सिना होटल त मेरो GF को होटल पो त । जति बेला गएनी हुन्छ । मेरो GF त्यही हुन्छ । म भन्दिन्छु फोन गरेर भन्दिन्छु जत्ति बसे नि हुन्छ फ्रि मा ।" थ्यान्क्स यार - बिनोदले भन्यो । “साथीको लागि यो ज्यान हाजिर छ यार त्यति जाबो के हो र ? प्वाँट पनि मिलाइदिउँँ कि बिकासलाई झैैँँ एक्लै बोर होलाउ । तिमी त्यहाँ छउन्जेल मेरो गर्लफ्रेण्ड तिमीसंग बस्छे, जे गरे नि हुन्छ”, पल्लबले खुब मज्जाको धाक लडाएर बोल्यो । “होईन अहिले ठिकै छ, चाहियो भने भनिहाल्छु नि” बिनोद अब ढुुक्क भयो । बिनोदले पल्लबलाई ल म भोलि बिहानै इन्टरभिउ दिन जान्छु भनेर गफ दियो र हामी सबै खाना खाएर सुत्यौँ ।
बिनोद बिहानै उठेर एउटा स्यानो झोलामा केही लुगाहरु हालेर सुनितासंगै घरबाट निस्कियो । सुनिताले निलो कुर्ता सुरुवाल लगाएकि थिईन । अलि अलि मेकअप गरेकी तर सार्है राम्री देखिएकि थिईन । सुनिताले “कहाँ जाने हामी ?” भनेर बिनोदसँग बाटोमा सोधिन् । “आज मलाई केही नसोध मैले जता लग्छु तिमी उतै जान्छौ, मैले जे भन्छु तिमीले त्यही गर्छौ” हाँस्दै बिनोदले भन्यो । उनीहरू घरबाट अलिक पुुर्ब पश्चिम हाइवेमा ठिक नेपाल टेलिकमको अघि आएर एउटा लोकल बस चढेे । दुलेगौंडा होटलमा पुगेर मेनेजरलाई भेटेर गफ गरेपछि बिनोदले १७ नम्बरको कोठाको साँचो पायो । मेनेजरले भन्यो “हजुरलाई जे खान मन छ, जे चाहिन्छ फोन गरेर भन्नुस् हामी ल्याइदिन्छौ ।" बिनोदले भने “हुन्छ, अहिलेलाई ब्रेकफास्टबाट सुरु गरौ ।” मेनेजरले उनीहरुलाई होटलको रेस्टुराँमा पुर्याएर बिदाबारी भए । बिनोदले ब्रेकफास्ट अर्डर गरेर सुनितालाई हेरेर भने, “सन्चै छौ ?" सुनिता केही नबोली मुसुक्क हाँसेर अर्कै तिर हेर्न लागि । रेस्टुराँमा केही विदेशीहरु मात्रै थिए । ब्रेकफास्ट खाँदै बिनोदले सुनितालाई भन्यो “अलि यता आएर संगै बस न ।” सुनिता उसको साईडमा आईन र बिनोदसंग डाहा नै लाउने गरि टाँस्सिएर बसिन् । बिनोदले आफ्नो हातले सुनिताको तिघ्राको भित्री भागहरु सुमसुम्याउन थाल्यो र उसको हात समातेर बिस्तारै बिस्तारै पुक्क उठेको उसको गठिलो छाती मुस्मुसाउन थाल्यो ।
“पहिले कहिल्यै गरेेेेको छौ ?” बिनोदले सोध्यो । "के ?" सुनिताले ठाडो प्रश्न सोधिन । “सेक्स”, बिनोदले आँँखा झिम्क्याउँदै भन्यो । “छैन”, सुनिताले एक शब्दमा सिधा उत्तर दिई । “गफ दिन्छौ, अचेल सबैले गर्छन स्कुल मै हुदाँ” बिनोदले भन्यो । “सबैले गर्छन होला तर मैले धरोधर्म छैन, बरु तपाईले गर्नु भा छ ?” उसले बिनोदलाई सोधिन । “मैले नि गर्या छैन” बिनोदले गफ दिए ।” माथि जाने हो ?” बिनोदले सोधे । सुनिताले केही भनिनन् । ब्रेकफास्ट आधिमै छोडेर सुनिता र बिनोद रुम नम्बर १७ तिर लाग्यो । मन मनै बिनोदले सोच्यो केही बेरमै मेरो स्यानो भाई सुनिताको भर्जिन पूती भित्र हुन्छ । १७ नंबरको रुमभित्र छिर्ने बित्तिकै बिनोदले ढोका लगाएर सुनितालाई च्याप्प समातेर टङ किस गर्न थाले । सुरुमा पन्छिन खोजिन तर बिनोदले उसलाई रहस्यमय तरिकाले मुडमा ल्याएरैै छोड्यो । केही बेरपछि सुनिताले पनि बिनोदलाई किस गर्न थाालिन ।
कहिले सुनिताको जिब्रो बिनोदको मुखभित्र हुन्थ्यो त कहिले बिनोदको जिब्रो सुनिताको मुखभित्र । बिनोदको हातहरु उसको साह्रो साह्रो दुधका पोकाहरु खेलाउदै थिए । बिनोदले दूध छामेरनै पत्ता लगायो कि उनी पक्का भर्जिन हो भन्ने कुरा । उनका हातहरु बिनोदको कपाल र टाउकोमा सलबलाउदै थियो । ५ मिनेट जति किस गरेपछि बिनोदले उसको सुरुवालको ईजार फुकाल्न थाले । सुरुवाल भुईमा झर्यो । बिनोदले उसको पेन्टिको दर्शन गरेर घुँडा टेकेंर कुर्तालाई उठायो । सेतो सिल्की पेन्टिमा अलि अलि पानी रसाएको थियो । बिनोदले आफ्नो नाक पेन्टिको माथिबाटै उसको माल तिर पुर्याए । कस्तो मिठो बास्ना मालको बिनोदले मनमनै सोँच्न थाल्यो । केहि बेर पेन्टिबाटै माल खेलाएपछि बिनोद उठेंर फेरी सुनिताको दूध चुम्न थाल्यो । बिस्तारै बिनोदले उसको कुर्ता खोल्यो । कुर्ता पनि भूईमा पुग्यो । अब उसको जिउमा खाली सेतो पेन्टी र सेतो ब्रा मात्रै बाँकी थियो । बिनोदले स्वर्गीय महसुस गर्दै उसको जिउको सबै भागहरु चाट्ने, चुस्ने, चुम्ने गर्न थाले । त्यही क्रममा बिनोदले आफ्नो टि-सर्ट पनि फुकालेर भुईमा मिल्कायो । उसको जिनको प्यान्ट भित्रको स्यानो भाई बडेमानको भई सकेको थियो । बिनोदले सुनितालाई रुम भित्रको उत्तरपट्टी रहेको वाथरुममा लग्यो । उसले सुनितालाई ऐनाको अगाडी उभ्याएर पछाडीबाट बिस्तारै ब्रा फुकालिदियो । उनका भोगटे जस्ता पोकाहरु अब उदांग भैसकेका थिए । उसको पोकाहरु देखेर बिनोदलाई सही नसक्नु भयो । अनि बिनोदले सुनिताका दूध नावालाक शिशुले भोक लागेको बेलामाझै च्युप च्युप च्युप च्युप… चुस्न थाले ।
त्यही क्रममा बिनोदले प्यान्ट खोलेर सुनिताको हातलाई तानेर कट्टुको माथिबाटै आफ्नो लाँडोको माथि राखिदिए । उसको स्यानो भाई झन् सन्कियो । बिनोदले बिस्तारै सुनिताको कट्टु भुईमा झारिदिएर जन्मजात जस्तै नाङ्गो बनाइदियो । अलि अलि रौँ उम्रिएको थियो सुस्मिताको पूती वरिपरि हरेर उ एकछिन टोलाएजस्तो भयो । बिस्तारै उसले रौँहरु पञ्छ्याएर सुनिताको पूतीको दर्शन गर्यो । उसले मनमनै भन्यो कस्तो राम्रो पूती धारिलो छुरीले निकै होसियार पुर्बक चिरा बनाएको जस्तो । साच्चै सुनिताले अहिले सम्म सेक्स गर्नु त परै जाओस् कान्छि औला पनि भित्र छिराएको छैन भनेर बिनोद पूर्ण विस्वस्थ भयो । सुनिता अझै उभिइरहेकि थिईन । बिनोदले आफ्नो हात उसको टांगको बिचमा पुर्याएर बिस्तारै हातको नाडीले उसको माई माथि रगडन थाले । सुनिता आखाँ चिम्लिएर “ऽऽऽऽस्सस्स्सि उम्म्म्म्म्म्म्म… इस्स्स्स्स्स… उहुहुहु… इस्स्स्स्… उम्ह्ह… ऽस्स्स्स्स… अह्ह्ह्ह… गरेर अनायसैै कलेजोको सम्म छुने कामुक सुस्केरा छोड्न थालि । त्यही बेलामा बिनोदले उसको हातलाई आफ्नो उदाङ्ग कण्डो माथि राखि दिएर तलमाथि गर्न थाले । सुनिताले झस्किएर आँखा खोलिन अनि बिनोदको कण्डो तिर हेर्दै भनिन “आम्मै, कत्रो रैछ ।” बिनोदले उसको ओठमा फेरी ओठ राखेर टङ किस गर्दै दाईने हातको चोर औँँला सुनिताको योनीको १ ईन्च जति भित्र घुसाई दियो र भित्र बाहिर गर्न थाल्यो । “उम्म… उम्म… उ्म… आह्ह… आह्ह… आह्ह…” सुनिता कराउदै थिईन । जति जति उनले कामुक सुस्केरा छोड्दै जान्थ्यो उतिउति बिनोद आफूलाई खुङ्खार बोको सम्झिँदै जान्थ्यो । पाच दस मिनेटपछि बिनोद सहनै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । उसलेे सुनितालाई समातेर बाथरुमको बाथ-टबमा जनवार पोजिसनमा राख्योे । सुनिताले के के भन्दै थिईन तर बिनोदले केही सुनिन । सुनिताको घुडा र हातहरु बाथटबमा टेकिएका थिए । बिनोदलाई बोकाको फिलिङ आइरहेको थियो । त्यहीँँ पोजिसनमा बिनोदले उसको हातहरु तानेर उसको कम्मरको पछाडीपट्टी ल्याएर समात्योे । अब उनी खाली घुडाले बाथटब टेकिरहेकी थिईन । बिनोदले एउटा हातले उसको हातहरु समातेको थियो भने अर्को हातले सुनिताको पुतिलाई फट्याएर लाडो घुसाउन थाल्यो । “ऐया दुख्यो!, छोड्नुस मलाई…, प्लिज छोड्दिनुन… मरेँ नि मम्मी…, भयो क्य… ऐया… ऐया… मरेँ नि मम्मी… ऐया… ऐया… आथ्था… आथ्था्था… टट्टायो के… मरेनि बिनोद छोड्नु न… प्लिज… ऐया… ऐया… आथ्था… आथ्था…”, सुनिता कराउदै थिईन । बिनोदले नसुनेको जस्तो गरेर उसको पूतीमा मेरो लाडो जबर्जस्ती कोचर्न थाल्यो । बाथरुम भरि रगतको खोला बग्न्न थाल्यो तर बिनोदको लाडो आधा पनि छिर्न गाह्रो भयो । सुनिता सहन नसकेर बाथटबमै लम्पसार परेर रुन थालिन । जति रोई कराई गरेपनि बिनोदले लाडो कोचेको कोच्यै गरिरह्यो । बिनोदले हानेको सहन नसकेर उ बाथटब मै लम्पसार मुर्छा पर्ला जस्तो भइसकेकी थिई तर बिनोदले आफ्नो माल कोचर्न छोडेन । आखिरमा आठ दस मिनेटपछि बल्ल बिनोदको पुरै लाडो सुनिताको पुतिभित्र पस्यो । बल्ल सुनिताले पीडा केही कम महसुस गर्दै थिई । सुनिता बिनोदको पञ्जाबाट उम्किन रोई, कराई, चिच्याई तर उसले न हात छोड्यो न लाडो कोच्न नै । बल्ल बल्ल हात फुुस्काएर उनले बिनोदलाई चिमोटेर पर धकेलिदिई । बिनोद बुम भएर उसलाई बाथरुममा उसलाई एक्लै छोडेर बाहिर निस्किन खोज्यो तर उसले बिनोदको हात समाएर सुक्क सुँक्क रुन थाल्यो । बिनोद निकै भावुक भयो र उसलाई उठायो । सुनिताले उठेर बिनोदलाई आफ्नो अंगालोमा बेस्सरी कसेर बाधिदिई र भनि प्लिज मलाई छोडेर नजानु न । बिनोदले किन रोएको त भन्यो । उसले दुखेपछि नरुने त भनी । जिन्दगीमा पहिलो चोटि गरेको मान्छेलाई यसरी पछाडिबाट हात समाएर गरेपछि दुख्दैनँ ? भनेर गुनासो पोखी । बिनोदको लाडो अझैै फलामझैँ कडा भैैरहेको थियो । उसले बिस्तारै सुनितालाई जताततै किस गर्न थालि । खास गरि केटिहरुलाई गर्ने बेला मुखमा भन्दा दुधको टुप्पिमा बिस्तारै जिब्रोले चलाइदिने घाँटिमा किस गर्दिने र औँँलालााई अनुहारमा सल्बलाएर ढाड मुसारिदिने गरेपछि बल्ल मज्जा महसुस गर्ने र यौनमा आनन्द लिने रहेछ भन्ने थाहा भयो र यसै गर्न थाल्यो । बिस्तारै सुनितालाई पनि मजा आउन थालेछ क्यारे अनि रुदै “उह्हुहुहु… उहुुँहुँहुँ… उहुँहुँ… गर्दै बिनोदको भाइसँग आफ्नो थाईलाई स्पर्स गराउन लागि । बिनोदले सुनिता लाइनमा आएको बुझ्यो ।
बिनोदले सुनितालाई निकै मुडमा ल्याएपछि अब हालौँ भनेर सोध्यो । बिनोदलाई लागेथ्यो अब उसले जीन्दगीमा कहिल्यै सेक्सको लागि सहमति दिन्न तर त्यसो भएन । उसले अनुमति दिई । बिनोद फुुरुङ्ग हुँदै उसको रगताम्मे थाइभित्र मिलाउँदै आफ्नो भाई बिस्तारै छिराउन लाग्यो । बस्तबमा भर्जिन नै भएपनि अगाडीबाट मिलाउँदै घुुसायो भने रगत धेेरै नबग्ने रैछ भनेर उसलाई पछुतो भयो । जे भयो सो भयो अब मिलाएर गर्छु भनेर बिनोदले मिलाउँदै छिरायो । यसपालि सुनिताले पनि उसलाई साथ दियो । एकछिन छिर्न गाह्रो भयो तर मिलाएर चार पाँच धक्का दिएको बिनोदको भाई साँधुरो ओडारभित्र ल्वाम्मै चिप्लिएर भित्रै छिर्यो । बल्ल बिनोदले सुनिताको पुतिको बास्तबिक गहिराईको मजा पायो । त्यसपछि भित्र बाहिर गरेर गर्न थालेपछि सुनिता फेेरि ऐया… आत्था… भयो… भयो… भनेर कराउन थाली । बिनोदलाई दया लागेर आयो र लाडो बाहिर निकाल्न खोज्यो तर सुनिताले माउसुलीले भित्ता समाएजस्तै गरेर उसको ढाड समात्यो र निकाल्नैै दिएन । त्यसपछि बिनोदले कुरा बुझ्यो र फेेेेरि ल्वाम कि ल्वाम चिक्न थाल्यो । यसपाली उ रोई कराई गरिन । बरु आँँखा चिम्लिएर निकै आनन्द मान्दै इस्स्स… आह्ह… इइस्स्सऽऽऽ आह्ह… आह्ह… आह्ह… आह्ह… उम्म्म… उम्म्म… याह्ह… इस्स्सऽऽऽऽऽ याह्ह… याह्ह… याह्… इऽऽऽस्सस्स्स… आह्… गर्दै मजा लिन थालि । १० मिनेट जति लगातार चिकेपछि बिनोदको झर्न लागेको थियो । बिनोदले आफ्नो माल उसको योनी भित्रै राखेर विर्य झर्न दिईन । विर्य झर्न लाग्दा ध्यान अर्कै तिर पुर्याउन बिनोदले सावर खोल्यो । सावरले बिस्तारै रगत पखाल्दै गयो र सावरको मुन्तिरै उसले सुनिताको पूतीमा बजाउन थाल्यो । पानीले झन उनीहरुको माल चिस्याउन लाग्यो । सुनिताले सावर बन्द गरि । यस पटक उसलाई निक रमाईलो लागेछ क्यार “अलि बेस्करी गर्नु न” भन्न थालिन । बिनोदले उसलाई आफूतिर फर्काएर सुनिताको खुट्टालाई आफ्नो काँधमा राखेर बेस्सरी बजाउन थाल्यो । “ऐया त्यस्तो जोडसँग हैन, अलि बिस्तारै, हो त्यसरी…, उम्म… उम्म्म… आहा… उम्म्म… उम्म… बल्ल सुनिता आनन्दको स्वर निकाल्दै चिच्याउन थालिन । यत्तिकैमा उसको योनी बिनोदको लाडोमा टाईट हुदैं गयो । उनका आफ्नो हातहरुले बिनोदलाई अंगालो हालेका थिए । केही बेरमा उनले बिनोदलाई अंगालोले तानेर किस गर्दै “आई लव यू” भनी । बिस्तारै उसको आँँखा सुस्ताउन लाग्यो । उसको आवाज पनि अलि बद्लेको जस्तो लागेपछि उसको निस्किन लागेछ भनेर बिनोदले झन मेरो स्पिड बढायो । सुनिताले आँँखा पुरै ओइलाउदै आह… आह… आह… आह्ह…आह्ह्ह… आह्ह्ह्हह… आह्हह… आह्ह… आह्ह… आह्हह्ह्ह… हह्ह… गर्दै बिनोदको ओठमा जोडले टोक्दै कन्नामा चिथोर्न लागि । सुनिताको पहिलो अर्ग्याजम् होला भनेर बिनोदले पनि झन् स्पिड बढाएर प्लाट… प्लाट… प्लाट… प्लाट… ट्याप… ट्याप… ट्याप… प्लिँँच… प्लिँच… प्लिँच… थप… थप… थप… पक… पक… पक… गरेर ल्वाम कि ल्वाम गर्न थाल्यो । केहि बेर पछि बिनोदको नि माल निस्किएला जस्तो भयो । नभन्दै बिनोदको शरिर जिरिङ्ग भएर आयो र सुनिताको पनि माल झर्न लागेर होला डल्लैै परेरमा बिनोदको कन्नामा चिथोर्दै आह… आह… आउउऊ… आह्ह… आह्ह… आह्ह… आह्ह… आह… हा… गरेर फचच्च्च… फच्च्च… फच… गर्यो । नभन्दै उसले सेतो माल झाारि । बिनोदले आफ्नो लाडो सुनिताको योनीबाट निकालेर सुनिताको हातमा राखिदियो र भित्र बाहिर गर्न लगायो । सुनिताले पनि कुरा बुझेछ । उ उठेर बिनोदको पछाडि आईइ अनि आफ्नो हातले बिनोदको लाडो समातेर भित्र बाहिर गर्न थालि । १ मिनेट जति भित्र बाहिर गरेपछि बिनोदको शरिरमा अनौठो तरङ्ग उत्पन्न भयो र २४० भोल्टको करेन्ट लागेझैँ भयो त सुनिताको हातैभरी सेतो र चिप्लो पदार्थ झर्यो । सुनिताले छि भनेर आफ्नो हात पानीमा पखाली । सिथिल भएर बिनोद र सुनिता सावरको मुनि १५ मिनेटसम्म किस खाँदै जिउलाई खेलाउदै बसिरह्यो । बिनोदले सुनितालाई सोध्यो - “उसले कस्तो लाग्यो त ?”, सुनिता लजाउँदै बोल्यो - “तपाई कस्तो बदमाश, कस्तो जनवार जस्तै हुनुहुँदो रहेछ । मलाई कस्तो दुख्याथ्यो ।" बिनोदले भन्यो पहिला चोट दिएपनि पछि मलम लाइदिएनँ र ? सुनिता भुुतुक्कै भई अनि कोठातिर भाग्न थालि तर भर्जिन तोडिएकोले हिड्नै नमिल्ने भएको रहेछ । बिनोदले उसलाई बिस्तारै डोहर्याउँदै कोठामा लिएर आयो ।
हवस्त हाम्रो भेेट फेेरि पनि हन्टिङ काण्ड भाग : ३ मा हुने नै छ धन्यबाद ।
हन्टिङ काण्ड : भाग २ 2017-07-13T15:34:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: हन्टिङ काण्ड : भाग २